Sterilizer (Autoclaves) mpanelanelana antonony | Mpanamboatra sy mpamatsy entona mpametaka entona China Medium Steam
MAST-V (Varavarana mihetsiketsika, 280L-800L)
MAST-V dia sterilizer malaky, mora vidy ary marobe izay nandinika sy namolavola araka ny takiana farany amin'ny andrim-pitsaboana sy ny CSSD. Izy io dia novolavolaina sy amboarina, atambatra ny fahaizany avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny, sady manome fahatokisana avo lenta sy fikojakojana mora foana.
Ny famolavolana ny efitrano mifanaraka amin'ny fanjakana GB1502011, GB8599-2008, CE, fenitra EN285 eropeana, ASME ary PED.
Mampiasa etona indostrialy ity fitaovana ity mba hanafanana rano madio hamokarana etona madio. Ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitsaboana, pharmaceutika ary sakafo izy io mba hanomezana etona avo lenta ho an'ny fanamorana sterilization. Izy io dia mahafeno ny fepetra takian'ny kalitaon'ny setroka ary afaka misoroka am-pahombiazana ny fonosana mavo sy ny kitapo mando ateraky ny kalitaon'ny setroka ratsy.
Madio Q madio herinaratra Generator
Ny andiam-pamokarana herinaratra madio Q dia mamoaka setroka madio amin'ny alàlan'ny fanafanana rano madio. Izy io dia manana tombony amin'ny habeny kely, fanafanana haingana, tsy misy fandotoana, fandidiana mora ary fahamendrehana avo lenta. Afaka mamaha amin'ny fomba mahomby ny loto amin'ny harafesina amin'ny fonosana fitaovana sy fitafiana.
Izy io dia azo ampiasaina betsaka any amin'ny departemantan'ny stomatology sy ophthalmology, efitrano fandidiana ary toeram-pitsaboana hafa. Izy io dia mety amin'ny fitaovana mafy mifono fonosana na tsy voaisy fonosana, zava-maneno a-kilasy A (ravin-tànana sy endoscope), fitaovana ampitaina, lamba fitafy sy fantsom-pohy, sns.
MAST-H (varavarana misosa mitsivalana, 1000L-2000L)
MAST-H dia iray amin'ireo karazana fanjakana vaovao momba ny sterilizer etona manana habe lehibe raha toa ka manome varavarana mitsivalana mandeha ho azy, fanaraha-maso marani-tsaina, fandidiana azo antoka ary fikojakojana mora, izay mety amin'ny mpanjifa avo lenta misy mizana lehibe. Izy io dia novolavolaina araka ny fepetra takiana farany amin'ny toeram-pitsaboana sy ny CSSD.
Andry tokana-A (140L-2000L)
MAST-A dia sterilizer malaky, mora vidy ary marobe izay dinihina sy novolavolaina araka ny takiana farany amin'ny andrim-pitsaboana sy CSSD. Izy io dia novolavolaina sy amboarina, atambatra ny fahaizany avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny, sady manome fahatokisana avo lenta sy fikojakojana mora foana.